Mourinho oo ka hadlay wararka lala xiriirinayo inuu ku laabanayo Real Madrid si uu u noqdo badalka Lopetegui – Gool FM
Dajiye October 22, 2018
(Manchester) 22 Okt 2018. Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa ka hadlay wararka lala xiriirinayo inuu dib ugu laaban doono kooxda Real Madrid si uu u noqdo badalka Julen Lopetegui.
Jose Mourinho ayaa kasoo muuqday shir jir jaraa’id kahor kulanka Champions League ay garoonka Old Trafford ku soo dhaweyn doonaan kooxda Juventus habeen dambe ee Talaadada.
“Mustaqbalkeyga wuxuu haatan yaalaa kooxda Manchester United, waxaan halkan ku joogaa heshiis, xitaa hadii uu soo idlaado waxaan isku dayi doonaa inaan sii joogo”.
“Waan ku faraxsanahay halkan garoonka Old Trafford, waxaan doonayaa inaan tababar u qaato kooxda ilaa mudada ugu fog ee macquulka ah”.
“Waxaan doonayaa inaan waqti dheer ku sii nagaado kooxda Manchester United, sababtoo ah wax walba ee kooxdan ah waan jeclahay, heshiiskeyga waxaa ka harsan mudo labo sano ah, waxaana doonayaa in mudo intaas kasii badan aan sii joogo Old Trafford.
RASMi: Alexis Sanchez oo aan ciyaari doonin kulanka Juventus ee tartanka Champions League